Search xvideoservicethief 2018 linux hdd usb 3.0 download windows - GenFK.com
Search Results - xvideoservicethief 2018 linux hdd usb 3.0 download windows
วิธีใช้ USB Disk Ejector (เวลามองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์) ดาวน์โหลดและติดตั้ง :http://quickandeasysoftware.net/downloads?download=USBDiskEjector1.3.0.3.zip . สำหรับคนที่ใช้งาน Win7, 8, 8.1 users อาจจะมีปัญหาเนื่องจากการ Safe Remove ของ Windows จะไม่เข้ากันกับ linux ของ MEDE8ER ดังนั้นการถอด HDD หรือ USB จาก Windows แล้วนำไปต่อกับ MEDE8ER อาจทำให้เครื่อง MEDE8ER มองไม่เห็น HDD ค่ะ ทางเราจึงแนะนำให้ใช้งานโปรแกรม ก่อนการถอด HDD ทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะ
วิธีใช้ USB Disk Ejector (เวลามองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์) ดาวน์โหลดและติดตั้ง :http://quickandeasysoftware.net/downloads?download=USBDiskEjector1.3.0.3.zip . สำหรับคนที่ใช้งาน Win7, 8, 8.1 users อาจจะมีปัญหาเนื่องจากการ Safe Remove ของ Windows จะไม่เข้ากันกับ linux ของ MEDE8ER ดังนั้นการถอด HDD หรือ USB จาก Windows แล้วนำไปต่อกับ MEDE8ER อาจทำให้เครื่อง MEDE8ER มองไม่เห็น HDD ค่ะ ทางเราจึงแนะนำให้ใช้งานโปรแกรม ก่อนการถอด HDD ทุกครั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะ Lobster : Entertainment Lifestyle 13 Oct 2015 · 197 views
USB 2.0, 3.0 Window Live
#USB_Window_Live ( Updated ) အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ 🙂 ကျွန်တော် အရင်နေ့တွေက ပြောထားခဲ့သလို Window ကို USB Flash drive ကနေ Live အသုံးပြုပုံကို အသေးစိပ် Video record and Photo record များနဲ့ ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ ။ ဒီနည်းပညာက ကျွန်တော် တီထွင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ အစောဆုံး ပြောပါရစေ၊ ကျွန်တော် Online မှတဆင့် လေ့လာမှတ်သားထားတာတွေ အကျိုးရှိမဲ့ ပညာရပ်လေးကို ကျွန်တော့နည်း ကျွန်တော့ဟန်နဲ့ ပြန်ပြီး ရှင်းပြပေးတဲ့သဘောပါ၊ ဒီနည်းက အရမ်းကို အသုံးတည့်ပါတယ်၊ လွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဒါမဲ့ လုပ်နေရင်နဲ့ အဆင်မပြေတာတွေလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပါ ဗျ။ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ Video Record နည်းအတိုင်း လိုက်ကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ယူရုံပါပဲ၊ ဆိုင်ရာ Window link နှင့် Formator App တွေကိုလဲ အောက်မှာ တစ်ခါတည်း Download link ကို ချပေးသွားမှာ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူများ Video နှင့် Photo မှတ်တမ်း လုပ်ဆောင် ပုံတွေကိုတော့ အစအဆုံး ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ် ခင်ဗျ။ Video Record HD link ကိုလဲ တစ်ခါတည်း ချပေးသွားပါ့မယ် Download ဆွဲယူလို့ ရပါတယ်ဗျ။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများကတော့ Lapto or Desktop - CPU 1.0Ghz အနည်းဆုံး ရှိရပါ့မယ် - RAM 2GB အနည်းဆုံး ရှိရပါ့မယ် - HDD 20 GB ဒါ့မဟုတ် SSD 40 GB / 100 GB ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနေရာမှာ SD Card memory ကို အသုံးပြု မှာဖြစ်ပါတယ် Micro SD 64 GB ကို အသုံးပြုထားပါတယ် ပုံမှန်အားဖြင့် Window Install တစ်ခု ဝင်ဆံ့မဲ့ Memory ဖြစ်ဖို့ လို့ပါတယ် 20 GB အထက်ရှိရပါ့မယ် ခင်ဗျ။ ကျွန်တော် အသုံးထားတဲ့ Flash drive ကို ပြော ရရင်တော့ USB 2.0 Card reader + Micro SD 64 GB ပါ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေများလဲ ကိုယ်အဆင်ပြေမဲ့ Memory 32 GB / 64 GB SD Cars or USB Stick 32GB / 64 GB up to များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ #ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Win TO USB application ကို Download ဆွဲပါ ပြီးရင် Install ပြု လုပ်ထားပါ ပြီးတော့ ကိုယ် အသုံးပြုမဲ့ Window ISO File ကို Download ဆွဲယူပါ၊ 32 bit နှင့် 64 bit ဆို System ၂ မျိုး ရနိုင်ပါတယ်၊ Window 10, 8.1, 8,7ဆိုပြီး ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ Window နှင့် System type ကို ရွေးယူ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဆော့ပ်ဝဲလ် ၂ မျိုး စလုံး ရပြီး ဆိုရင် USB Window စပြီး ဖန်တီးလို့ ရပါပြီ ။ Install လုပ်ထားတဲ့ WintoUSB ကို ဖွင့်ပါ Image File Search box မှာ Window ISO Image ကို ရှာပါ တွေ့ရင် Select မှတ်ယူလိုက်ပါ၊ ကိုယ်ထည့်သွင်းမဲ့ System type 32bit or 64 bit ရွေးယူပါ၊ ပြီးရင် Next ဆိုတာလေး ရွေးပေးပါ၊ ပြီးတော့ ကိုယ်ထည့်သွင်းမဲ့ Memory type ကို ရှာပါ။ ဥပမာ Internal HDD လား၊ External HDD လား၊ Internal or External SSD လား၊ External USB Stick လား၊ External USB Card Reader+ Micro SD Card memory လား စသဖြင့် ကိုယ် ထည့်သွင်းမဲ့ Disk ကို Select မှတ်သားယူပါ။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာတစ်ခုရှိပါတယ် ကိုယ့်ထည့်သွင်းမဲ့ Memory Disk ထဲမှာ အရေးကြီး အချက်လက်တွေ ရှိသလား မရှိဘူးလားစစ်ဆေးပါ၊ ရှိရင် အခြား Memory disk ကိုရွေ့ထားဖို့ လိုပါတယ်နော်၊ #အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ External USB Card Reader + Micro SD 64 GB memory ကို ရွေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးရင် Format system တစ်ခုကိုရွေးပေးရပါ့မယ် MBR for BIOS GPT for UEFI MBR for BIOS and UEFI ဆိုပြီး ရွေးခိုင်းပါတယ် ကျွန်တော့ရဲ့ laptop နှင့် Support Window ကတော့ MBR for BIOS နှင့် GPT for UEFI ကို support ပေးပါတယ် ကျွန်တော်က ဒီနေရာမှာ ​ပြောချင်ပါတယ် ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများရဲ့ စက်မှာ MBR for BIOS BIOS and UEFI ကို Support ရ ရင် အဲဒီ ဟာကို ရွေယူကြဖို့ ပြောချင်ပါတယ် ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ MBR for BIOS ကို ရွေးခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့ Yes or No = YES ကို ပေးဖို့ လိုပါတယ် ခင်ဗျ။ အဲဒီနောက်တော့ Formating လုပ်နေတဲ့ အဆင့်ရောက်ပါပြီ၊ Formating အဆင့်ပြီး ရင် Partition drive တွေမြင်တွေ့ရပါ့မယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာလေးရှိပါတယ် HDD / SSD နဲ့ ပြုလုပ် သူတွေဆိုရင် USB Window Partition တစ်ခုပဲ ပြပြီး USB Flash disk USB Card reader+ Micro SD Card ဆိုရင် Partition ၂ ခုပြပါတယ် ကျွန်တော် အသုံးပြုတဲ့ Disk က Card reader+ Micro SD Card မို့ ၂ ခုပြပါတယ် ၂ခုစလုံးက အတူတူပါပဲ နော် ဟုတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ISO Image လဲ ရွေးပြီးပြီ ထည့်သွင်းမဲ့ HDD/ SSD / USB Flash disk/ USB card reader + Micro SD တစ်ခုခုလဲ ရွေးပြီး ခဲ့ပြီ Format type တွေ ရွေးပြီးပြီ Partition တွေမြင်နေ ရပြီ ဆိုရင် နောက်ဆုံး အဆင့် Installation mode ကို ရွေးပေးဖို့ပါတယ် 1/ Legacg 2/ VHD 3/ VHDX ဆိုပြီး ၃မျိုး ရှိပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနေရာမှာ Software က ရွေးပေးထားတဲ့အတိုင်း VHD ကိုပဲ ရွေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ Legacy ကို ဦးစားပေးရွေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ရွေးပြီးသွားတဲ့ နောက်မှာတော့ Installing အဆင့်ကိုသွား ဖို့ Next ကို ရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ ခင်ဗျ။ ပြီးတော့ Window installing အဆင့် ကို ထိုင်ကြည့်နေရုံပါပဲ ခင်ဗျား။ 0% မှ 50% မှ 100% Completed အဆင့်ထိ စောင့်ရပါ့မယ် ခင်ဗျား။ 100% ပြည့်စုံသွားပြီ ဆိုရင် လက်ရှိ Window ကို Shut down or Restart လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အထက်က ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့ အဆင့်အားလုံးဟာ USB 2.0 / 3.0 အတွက် Window installing အဆင့် ပြီး ဆုံး သွား ပါပြီ ခင်ဗျ။ လုံးဝ ပြီးဆုံးသွားတာ မဟုတ် သေးဘူးနော် 🙂 USB အတွက် Boot လုပ်ဖို့ အဆင်တွေ ရှိနေပါသေးတယ် ခင်ဗျ။ #ဒုတိယအဆင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ခင်ဗျ ဒုတိယ အဆင့်မှာ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ Photo picture တွေကို တစ်ခုချင်း လိုက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နော် #Video ကိုပဲ ဆက်ကြည့်ပါနော် Video Record ထဲမှာပဲ တစ်ခါတည်း ရှင်းပြပေးထားပါတယ် Video Picture 1 ကိုကြည့်ပါ Picture 1 က Boot function ကို ရှာရပါ့မယ် ကျွန်တော် မိတ်ဆွေ စက်မှာ ဆိုရင်တော့ အစောက ကျွန်တော်တို့ Window က Shut down or Restart ကျသွားမှ ဖြစ်ပါတယ် ပြီးရင် Laptop or Desktop ကို Power On ပေးရပါ့မယ် ပုံမှန်စက်တွေကတော့ F2/ F 8 / F10 / F 12 Any Key စဖြင့် Boot function ကို ခေါ်လို့ရပါတယ် ကျွန်တော့စက်ကတော့ F2 ပါ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ နည်းကတော့ စက် ပါဝါတက်တက် ခြင်းကို Boot function key တွေကို အဆက်မပြတ် နှိပ့်ထားပေးပါ ပြီးတော့ BOOT နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ အသေးစိပ် Screen box တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပြီ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများ Boot function ကိုသွားပါ၊ Boot လုပ်မဲ့ Disk ကို ရွေးပေးရပါ့မယ် BOOT = HDD / SSD / USB Flash disk / USB Card reader+Micro SD တစ်ခုခု ရွေးပေးရပါ့မယ် ပထမ အဆင့်တုန်းက ကိုယ်ထည့်သွင်းထားခဲ့ တဲ့ window installting Disk ကို သတိရပါ HDD လား SSD လား USB Flash/ SD Card လား သတိရပါ ဟုတ် ပြီ ကျွန်တော်ကတော့ USB Card Reader ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီ Disk ကို Boot လုပ်ပါ့မယ် ပုံ ၁ အရ ဆိုရင် ကျွန်တော့ ရဲ့ Disk name က Generic Storage device ဖြစ်ပါတယ် BOOT priority order 1 မှာ ပုံ၁ အတိုင်း ရွေးခဲ့ပါတယ် #အဓိကတော့ BOOT လုပ်မဲ့ Disk ကို ရွေးပေးဖို့ပါပဲ ကျွန်တော်ကတော့ ရွေးခဲ့ ပြီ ပြီး Save or Save and Exit လုပ်ပါ့မယ် YES or NO တောင်းရင် Yes ကို နှိပ့်ပေးပါ Video ပုံ ၂ ကို ကြည့်ပါ Yes ကို ရွေးခဲ့ပါတယ် Video ပုံ ၃ မှာဆိုရင် USB Window ကို loading စလုပ်နေပါပြီ ပုံ ၄ ကိုကြည့်ပါ ကျွန်တော်ကတော့ Time Zone ကို ပဲ UTC+ 06:30 Yangon မြန်မာ အချိန်ကို ရွေးခဲ့ပါတယ်၊ ပြီးတော့ Next ကို နှိပ့်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံ ၅ ကို ကြည့်ပါ Use Express settings ကို ရွေးခဲ့ပါတယ် ပုံ ၆ ကိုကြည့်ပါ Justamoment ခဏလေးစောင့် လိုက်ပါ ပုံ ၇ ကို ကြည့်ပါ User Name မှာ မိတ်ဆွေများ နှစ်သက်တဲ့ အမည့်ထည့်ပါ Password တွေ တစ်ခါတည်း ထည့်ချင်ရင်တော့ ထည့်လို့ရပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ မထည့်သေးပါဘူး ပြီးရင် Next ဆိုတာလေး နှိပ့်ခဲ့ပါနော် ပုံ ၈ ကို ကြည့်ပါ USB window အဆင့်သင့် သုံးလို့ရတဲ့ အဆင့် ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ ဗျ USB Window Live 100% ပြည့်စုံပါပြီဗျ ကျွန်တော်ကတော့ Window 10 Pro 64bit ကိုမှ Offical ကို အသုံးပြု ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ပုံ ၈ အထိ ကတော့ USB Window အဆင့် ပထမအဆင် ဒုတိယအဆင့် 100% အောင် မြင် သွားပါပြီ ပုံ ၉ ကို ကြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ ထည့်သွင်းထားတဲ့ USB Window က လက်ရှိ Laptop & Desktop နဲ့ အံ့ဝင်ဂွင်ကြ ဖြစ်မဖြစ် ဖို့ Devive Manager ကို စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများကတော့ မိမိရဲ့ Laptop , Desktop Computer Icon Or PC Icon ကို Right click ထောက် Properties ကိုဝင်လိုက်ရင် Window ရဲ့ Information box ကျလာပါလိမ့်မယ် အဲဒီထဲမှာမှ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်မှာ Device Manager ဆိုပြီး ရှိပါတယ် အခြားနည်းကတော့ Run box ကနေလဲ Device Manager ဆိုပြီး စာရေးရှာလဲ ရပါတယ်ဗျ Ok , ကျွန်တော်တို့ Device Manager ထဲ ဝင်လိုက်ပါ့မယ် ပုံ ၁၀ ကိုကြည့်ပါ အဲတာကတော့ ကျွန်တော့ Laptop ရဲ့ Driver လိုအပ်ချက်တွေပြနေပါတယ် ပုံပါအရ ဆိုရင် Display adapter မမှန်ပါဘူး ပြီတော့ Other devices မှာ Driver တွေ မမှန်ပါဘူး Driver တွေ မှန်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ?? Driver တွေ မှန်ဖို့ Driver Software တွေ သုံးရပါ့မယ် ဆိုင်မှာ ဝယ်သုံးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Online ပေါ်ကနေ Update လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Driver မှန်အောင် လုပ်ယူလို့ ရပါတယ် နော်။ ကျွန်တော်ကတော့ Driver part application နဲ့ Driver all မှန်အောင် လုပ်သွားခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများလဲ မိမိတို့ အဆင်ပြေသလို လုပ်ဆောင်လို့ ရပါတယ် ခင်ဗျ ပုံ ၁၁ ကတော့ ကျွန်တော့ Internal HDD Offline ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ External USB Port ကနေ Window live သုံးပြုတဲ့အခါ Internal HDD တွေ offline တွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် စိုးရိမစရာတော့မလိုပါဘူး Offline ဖြစ်သွားရင် Online ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ယူလို့ ရပါတယ် လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အဆင့်ကတော့ Run box ကိုသွားပါ computer management ဆိုပြီး ရေးလိုက်ပါ ပြီးရင် Enter ခေါက်ပါ Computer Managment box ကျလာပါလိမ့်မယ် Offline ဖြစ်နေတဲ့ Disk ကို Right click ထောက်ပါ Online ကို နှိပ့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ကျွန်တော် ရှင်းပြထားတဲ့ ပထမအဆင့် ဒုတိယ အဆင့်တွေ ကို သေခြာ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် USB 2.0 / 3.0 Window live ကို အချိန်တိုအတွင်း ရ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေများအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Video Record နှင့် Picture record တွေ အစအဆုံးကြည့်ရှူ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော့ရဲ့ မှတ်တမ်း စာလုံးပေါင်းအမှားများ ရှိရင်လဲ အဆင်ပြေသလို ကြည့်ရှူ့ဖတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျ၊ ဆွေးနွေး အကြံပြုချင်သူများလဲ Comment box မှာ လာရောက် ဆွေးနွေး အကြံပြုပေးလို့ ရပါတယ် ခင်ဗျ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများ ကိုဗစ်ကာလမှာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ၊ အနာရောဂါ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ပါတယ် ဗျ။ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးပါ KO ANM / Hkamti -------------------------- Window 10 Pro 64bit ISO Image download link https://softlay.net/operating-system/windows-10-iso-download.html ---------------------------- Microsoft Web Window 10 64 bit ISO Image download https://software-download.microsoft.com/sg/Win10_2004_English_x64.iso?t=cc3db9dd-5c15-4518-b6da-081aae9ee1f0&e=1603275586&h=42f16d8ec8019583effcde6a77d55b19 ---------------------------- Window 8.1 Pro 64bit ISO Image download link https://softlay.net/operating-system/windows-8-1-pro-download.html ---------------------------- Window764 bit ISO Image download link https://softlay.net/operating-system/windows-7-ultimate-iso-download.html ---------------------------- Win To USB application download link https://download.cnet.com/WinToUSB/3000-18513_4-76061723.html ----------------------------- USB 2.0/ 3.0 Window Live HD Video download link https://www.mediafire.com/download/lcsgugs2jdjffgo ------------------------------ Computer Technology ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္မ်ား 22 Oct 2020 · 416 views
How to Flash Bootable Image (Windows/Linux) in USB Devices for Installation of OS Using Rufus
Hi, There. We are giving you tutorial how to flashabootable image in your USB Device via Rufus (FailSafe Mode) For Any Windows 7/8/8.1 & 10, Server OS 1. you need at least 8GB of USB 2.0/3.0/3.1 or Memory Card or Pen Drive 2. you can use usb HDD (External) too, It boosts more speed than USB in Installation. 3. you needaspare pc (Dad, Mom, or Siblings or Your GF PC/Laptop for few minutes you can beg to them) or your current pc with bad windows [At least Working Taskmanager (Ctrl + Shift + ESC / Run Window (Win+R) ] 4. You need to downloadaflasher tool like Rufus, 5. You Need %s Windows ISO which you licensed for PC from official Microsoft Site (or findalicense key tag in your PC case or motherboard box for custom build or in your assosiated email or microsoft ID). 6. Download Rufus tool from rufus.ie or google or bing it. 7. backup your data from USB to other place or in cloud ID like google drive 8. After Select iso and keep in mind it will destroy anything in that USB and Select Yes, in the last boot up PC and install windows and give your PCanew fresh windows life. for Linux / Unix 1. Download any linux iso (any distribution) 2. Repeat step 3,4,6,7& 8 3. Here is something changed It will ask you to download syslinux, let it do it Second It will ask you write in iso or dd mode, i recommend you to use DD mode because it works with all PC, iso sometimes works great. But use DD mode Check must be performed before flashing USB: (Change settings in Rufus Accordingly): 1. If you have modern PC (i Series with 2nd Generation), use UEFI Motherboards with GPT 2. If you have Earlier or mid PC with Core i Series But No UEFI , and simple legacy BIOS You can use MBR and leave the rest If your ISO is Single , It'll show up another settings 1. standard windows installation (iso will be copied) [4 GB] 2. Windows to go (windows will be installed universally on USB) [Only works with Windows 8 / Server 2012 or later) [35 GB] AND that's all for today thanks for watching, Keelah Se'Lai! QualCorp Nephilim's Knowledge Library - English 16 Jul 2019 · 79 views
DOWNLOAD APP: http://bit.ly/2s02UK1 Lo sapevate che uno smartphone #Android può fare anche questo? :D ....non infieriscoenon aggiungo altro. 😂 Carla Stea 22 May 2018 · 1K views
Mở hộp SSD box USB 3.0 12+6PIN cho Macbook Air A1370, A1369, MC503, MC504, MC505, MC506, MC968, MC969, MC965, MC966
HDD Box SSD M2 dùng cho ổ cứng Macbook + Thông số kỹ thuật: - Giao tiếp: USB 3.0 Micro B Female - Băng thông: 5Gbps - Tương thích hệ điều hành: Windows, Mac-OS, Linux, Chrome OS.v.v. - Tương thích với các ổ cứng SSD M2 của Apple Macbook Air A1370, A1369, MC503, MC504, MC505, MC506, MC968, MC969, MC965, MC966. - Màu sắc: Màu trắng bạc, vỏ nhôm - Kích thước: 12*2.8*0.9Cm - Khối lượng: 300 - Đóng gói: SSD box USB 3.0 cho Macbook Air, Cáp USB 3.0 AM-Micro-BM 40Cm, túi đựng. - Bảo hành: Bảo hành 06 tháng (không bảo hành các trường hợp hư hỏng do người sử dụng gây ra) Xem chi tiết sản phẩm tại link: https://phukiendientu.com/products/ssd-box-usb-3-0-12-6-pin-doc-o-ssd-cho-macbook-air-a1369-a1370-cy-u3-089 #ssd_box #box_doc_o_ssd_macbook #hdd_box #hop_doc_o_cung Siêu Thị Phụ Kiện Điện Tử 8 Apr 2019 · 389 views
ORICO25 USB3External Hard Drive Enclosure Casing
ORICO 2.5 inch SATA I/II/III HDD SSD LED indicator; compatible with Windows, Linux and Mac. USB 3.0 to SATA III Supports UASP Protocol SuperSpeed USB 3.0 hasamaximum data tranfer rate of 5Gbps, 10 times faster than USB 2.0;20% faster than traditional USB 3.0, with UASP Transfer Protocol,which reduces CPU utilization, data delay and waiting time. Transparent Design, High Quality Material Vibrant transparant casing with fireproof, shockproof ABS material, designed to beabeautiful addition to your desk. Automated Distributor 8 Nov 2018 · 5.6K views
kahi to hoga epi 53ျမန္မာေအာကားျကည့္မယ္ኢትዮጵያ ሴክስ ቪዲዮWe Got Married TaeJoon Bomi Ep 18 Engsubishare tere guru randhawaထိုင္းအာျပာကားምርጥ ብድ ቪዲዮမြန်မာခိုးစားຫັນງອາirani xnxxi 18 feerxxccsc918xx 2018 price hd video song download hdMujra Mastaiလိုးကားေအာ္ကားကိုုရီးယားအျပာကားTARSANxxSeve fram.netလိုးကားျားဪကားမ်ားcookiezi facewalkaway booty